I Albania na Repoblikan' i Albania dia firenena ao Eorôpa, ao amin' ny tapany atsimon' io kôntinenta io, ao amin' ny Saikanosy Balkanika. I no Tirana no renivohiny. Manana velaran-tany mirefy 28 748 km² izy. Atao hoe Shqipëria na Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːsə] (ara-bakiteny: "firenen' ny voromahery") izy amin' ny fiteny albaney. Mamaritra ny sisin-tanin' i Albania ao avaratra-adrefana i Môntenegrô sy i Makedônia Avaratra, ao avaratra-atsinanana i Kosovo, ary ao atsimo-atsinanana i Grisia.
Firenena be tendrombohitra i Albania, izay ahitana tampona mahatratra haambo eo anelanelan' ny 2 100 m sy 2 600 m. Ny tany iva, izay hita amin' ny tapany andrefan' io firenena io, dia manamorona ny Ranomasina Adriatika. Rakotra ala ny iray ampahatelon' ny tanin' i Albania. Ny mponin' i Albania dia ahitana indrindra ny Albaney, izay heverina ho taranaky ny Iliriana (isan' ny vahoaka indô-eorôpeana). Ny Grika, ny Rôma, ny Serba ary ny Bolgara no vahoaka vitsy anisa ao. Ny ankamaroan' ny mponina dia Miozolmana. Maro ny Albaney niorim-ponenana ao amin' ireo faritra sy firenena manididina: ao Kôsôvô, indrindra, any Makedônia sy any Serbia ary any Môntenegrô. Nandritra ny ady tao Kosovo tamin' ny taona 1999 dia nandray Albaney voaroaka avy any Kôsôvô miisa analiny maro i Albania. Anisan' ireo firenena mahantra indrindra ao Eorôpa i Albania izay manakina ny toekareny amin' ny fambolena. Tamin' ny taona 1997 dia nizaka fahasahiranana ara-toekarena i Albania.
(Feja e Shqiptarit është Shqiptaria)
Filamatra : «»
Praiminisitra Edi Rama
Filoham-pirenena Bujar Nishani
Velarantany 28.748 km²
Fahaleovantena 28 Novambra 1912
Faritra Internet .al
Antso an-tariby 00355
Hiram-pirenena Hymni i Flamurit
Raha zohina ny tantara, ny albanezy dia avy amin'ny iliriana, mponina indo-eoropeana nanorim-ponenana teny amin'ny morontsiraky ny ranomasina adriatika. Vokatry ny fivoarana ara-toe-karena noho ny firoborobon'ny taozavatra vita amin'ny vy, tany amin'ny taonjato faha-6 tal. J.K., dia nanjary natanjaka izy ireo ka nanjakazaka tokoa tamin'ny varotra, ary zary nampitahotra ireo firenena nanodidina, indrindra indrindra tamin'ny fampiasan-kery tamin'ireo mpiantsambo.
Tamin'ny taona 168 tal. J.K. dia notafihan' i Rôma i Iliria, ary nataony teo ambany fifehezany nandritra ny taonjato dimy mahery kely. Faritany rômana tany Iliria - "Illiricum" - no niantsoana azy tamin' ny andron' i Jolio Kaisara . Fa tamin' ny taonjato faha-2 taor. J.K. kosa no nanomboka nahenoana voalohany ny fiantsoana hoe "Albanoi", tamin' ny antonta-taratasy nosoratan' i Ptôlemaio, mpandalina ny jeôgrafia.
Rehefa nirodana ny Empira Rômana tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-5 dia natao teo ambany fahefan' ny Empira Tatsinanana - na koa antsoina hoe Empira Bizantina - i Iliria. Tamin' izany dia nanjary toerana nanan-danja teo amin' ny varotra ireo tanàna nisy seranan-tsambo lehibe toa an' i Dyrrachium. Tany amin' ny faritany kosa dia nifanesy niditra sy nandrava tany ireo mponina mpivezivezy toa ny Gôty sy ny Hona; ny Bolgara tamin' ny taonjato faha-5; ny Slava tamin' ny taonjato faha-6 sy ny taonjato faha-7 izay nibodo ny faritra avaratr' i Iliria. Maro tamin' ireo albaney nivadika ho kristiana no nandositra tany amin' ny faritra atsimo. Tamin' ny taonjato faha-11 sy ny taonjato faha-12 kosa dia ireo Normàna no nanjakazaka tao, ary tamin' ny taonjato faha-14 dia tonga kosa ny Serba mandra-pirodan' ny Fanjakan-dehibe Serba tamin' ny taona 1355, ka nizarazarana an' i Albania tamin' ireo tompo-menakely teo an-toerana.
Ny 70 isan-jaton' i Albania dia tendrombohitra avokoa, ka ny tendro avo indrindra dia 2 753 m (tendrombohitr' i Korab). Ny 30 % kosa dia lemaka izay ifandimbiasan' ny tondra-drano sy ny hain-tany, ka tsy mahatsara ny fambolena. Ny lemaka tena mahavokatra dia ireo manodidina farihy (farihin' i Ohrid, Prespa lehibe sy Prespa kely), sy ireo lembalemba sasantsasany eny anelanelan' ny lemaka sy ny tendrombohitra. Ny hany nosy mba miavaka dia ny nosy Sazan.
Ny ony lava indrindra dia ny Drini: 282 km, izay azo lazaina fa manana rano ampy mandritra ny taona. Ireo hafa kosa, toa an' i Semani sy i Vojsa, na dia mihoatra ny 160 km aza ny halavany, dia saika maina foana mandritra ny fahavaratra.
I Albania dia manana mponina azo lazaina ho ranoray, satria ny 96 % dia Albaney avokoa, izay mizara ho Gega any avaratra, ary Tôska any atsimo, ary sarahin' ny ony Shkumbin tsara ireo faritra roa ireo. Mizara ho vondrona roa mazava izy ireo na eo amin' ny lafiny ara-pinoana, na ara-pitenenana, na ara-poko koa aza. Karazam-pivavahana telo no tena misongadina ao Albania: ny Miozolmàna, tokony ho ny 70 %-n' ny mponina ; ny Ôrtôdôksa: 20 %, ary ny Katôlika: 10 %.
Albania - Alemaina - Andôra - Aotrisy - Belzika - Bielôrosia - Bolgaria - Bôsnia-Herzegôvina - Danemarka - Espaina - Estônia - Fanjakana Mitambatra - Finlandy - Frantsa - Grisia (na Gresy) - Hôngria (na Hongaria) - Irlanda - Islandy - Italia - Jeôrjia - Kipra (na Sipra) - Kôsôvô - Krôasia (na Krôatia) - Letônia - Liktenstaina - Litoania - Loksemborga - Masedônia Avaratra (na Makedônia Avaratra)- Malta - Môldavia - Môntenegrô - Nederlandy - Nôrvezy - Okraina - Pôlônia - Pôrtogaly - Tsekia - Romania - Rosia - San-Marîno - Serbia - Slôvakia - Slôvenia - Soeda - Soisa - Tsekia - Vatikàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Albania&oldid=1041585"
Dernière modification le 16 Desambra 2021, à 16:27
Voaova farany tamin'ny 16 Desambra 2021 amin'ny 16:27 ity pejy ity.